काठमाडौं, १० माघ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि राजनीतिक कोर्ष संविधानभन्दा बाहिर गएको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरु कनिकुथी तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षा गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।
यहीक्रममा अप्ठेरोगरी तर्क गर्नेमा पूर्वमाओवादी समूहका नेता रामबहादुर थापा बादल रहेका छन् । उनले संसद विघटनलाई अग्रगमन भनेर अर्थ्याइरहेका छन् ।
बादलजस्ता बाहिरबाट भित्रिएकाहरुको अप्ठेरो त सामान्य भइहाल्यो । तर, ओलीका खास भित्रियाहरु पनि ओलीको कदमबाट अलमलमा छन् । सुवास नेम्वाङको बोली बन्द भएको छ । अग्नि खरेलहरुले पनि आगो ओकल्न सकिरहेका छैनन् ।
ओलीको कोर टिममा रहेका कतिपय नेताहरु बरु संसद पुनःस्थापना भए हुन्थ्यो भन्ने शुभेच्छा बोकेर बाँचिरहेका छन् । ‘ओलीको अस्तित्व जेसुकै होस्, तर नेकपा बच्ने सम्भावना त बच्थ्यो नि । पार्टी फुट्दाखेरिको घाटा चुनावपछि थाहा हुन्छ,’ बालुवाटारमा हुने सानातिना छलफल र आफ्ना निकटष्थ उनीहरुले यस्तो तर्क गर्न थालेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार ईश्वर पोखरेल र विष्णु रिमाल ओलीकै लाइनमा अडिग छन् । विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु भने अझै एकता जोगिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बोकेर बाँचिरहेका छन् ।
उनीहरुको डर के हो भने ‘जीवनभरी लोकतन्त्रको लागि लडियो, संसद पुनस्थापना पनि नहुने र चुनाव पनि नहुने अवस्थामा ओलीले चाल्न सक्ने अझ ठूलो कदमपछि लोकतन्त्रलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? चर्का कुरा कसरी गर्ने ? सार्वजनिकरुपमा कसरी प्रस्तुत हुने ? ज्ञानेन्द्रको कदमको पछि लागेजस्तै अवस्था आयो भने के हुन्छ ?’
त्यसैले उनीहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलन र संविधान जोगिने शर्तमा ओली भाँडमा गए नि जाऊन् भन्दै संसद पुनःस्थापनाको कामना गर्न थालेका हुन् ।
संसद पुनःस्थापना नभए ओलीले थप कदम चाल्न सक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ । ‘ओलीले न बैठकमा छलफल गर्छन्, जनवादी केन्द्रीयता पनि छैन । राजा र प्रजाजस्तो अवस्था बैठकमै देखिन्छ । बैठक निर्देशन दिन मात्रै डाकिन्छ,’ ओली समूहका एक नेताको बुझाई छ, ‘अहिले सुरुसुरुमा त ठिकै छ । बाटो धेरै बाङ्गिँदै गयो भने त हामीलाई धेरै गाह्रो छ ।’